PSJTV | लेख्न छुटेका कथाहरु
आइतबार, २३ मङि्सर २०७५ बच्चु हिमांशु
गत हप्ता मंसीरको पन्ध्र, विवाहको विशेष साइतलाई सदुपयोग गर्दै धेरै प्रेमिल जोडीहरुले आफ्नो जिन्दगीको नयाँ अध्याय सुरु गरिरहेका थिए। ठिक त्यसैबेला, युवा वियस राईपनि आफ्नो जिन्दगीको एउटा अर्कै अध्याय सुरु गर्ने भव्य तयारीमा थिए। तर मंसीर पन्ध्रको शुभसाइत उनका लागि विवाहको साइतभने थिएन। उनी त आफ्नो बाह्र वर्षको सक्रिय प्रहरी सेवाको परिचयसंगै जिन्दगीमा एउटा अर्को नयाँ परिचय थप्ने तरखरमा थिए। संयोग के थियोभने, प्रहरी सेवामा बाह्र वर्ष पार गरेर तेह्रमा लाग्दैगर्दा आफ्ना तेह्रओटै कथाहरुका साथ उनी कथाकारका रुपमा मंचमा प्रस्तुत भैरहेका थिए। त्यो दिन राजधानीको अनामनगरस्थित मण्डला थियटरमा उनको पहिलो कथाकृति 'हिउँमाझी' भव्यताका साथ विमोचन भैरहेको थियो।
नेपाली साहित्यको बजारमा पहिले कहिल्यै नसुनिएको नाम थियो वियस राई। कुनै अर्कै ग्रहबाट अवतरित एउटा 'एलियन'जसरी टुप्लुक्क आफ्नो किताब लिएर हामीमाझ आएका थिए वियस। सम्भवतः मण्डलाको लोकार्पण कार्यक्रमकै दिन धेरैले पहिलोपटक उनको नाम सुनेका थिए। 'हिउँमाझी'को सार्वजनिकीकरणमा प्रमुख अतिथिको रुपमा मंचमा प्रस्तुत भएका पूर्वकुलपति वैरागी काइँलालेपनि वियसलाई पहिला नपढेको कुरा मंचबाटै कन्फेस गरिहाले। तर 'हिउँमाझी'को लोकार्पण कार्यक्रम सम्पन्न भएको एकहप्ता बितेपछिको यो समयमा हामीले वियसलाई नचिनेपनि हुने अवस्था अबभने रहेन। 'हिउँमाझी'जस्तो बेजोड कथाकृतिका सर्जक यी कथाकारको बारेमा थाहा नभएकाजतिले थाहा पाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। वास्तवमा उनको बारेमा थाहा नलिनु भनेको समकालीन नेपाली साहित्यको एउटा उत्कृष्ट हस्ताक्षरलाई हामीले बेवास्ता गर्नु हो।
वियस राई तीसको दशकको अन्तिमतिर सोलुखुम्बु जिल्लाको तत्कालिन सल्यान गाविसमा बुबा राइमन राई र आमा रामकुमारी राईको कोखबाट यो धर्तिमा प्रकट भए।उनको बाल्यकाल आफ्ना बालशखाहरुसंग गाउँकै विद्यालयमा कखरा सिक्दै बित्योभने उनको किशोरावस्था आफ्नै बस्ती वरिपरीको पर्यावरणसंग बात मार्दै आफू जन्मिएकै गाउँठाउँमा बित्यो। उच्चमाध्यमिक शिक्षासम्मको अध्ययन गाउँमै गरिसकेपछि उनको जिन्दगीको आयतन एक्कासी बढ्यो। उनको गाउँठाउँले उनको व्यक्तित्वलाई आफ्नै परिधिभित्र सिमित राख्ने हिम्मत गरेन। अनि गाउँभन्दा ठूला आफ्ना सपनाहरुको कुम्लो बोकेर वियस राजधानी छिरे। देशले आगो मागिरहेको समय थियो त्यो। राजधानीको सडकमा युवाहरुको रगत उम्लिंदै,पोखिंदै थियो। देशमा अर्कै व्यवस्थाको माग गर्दै परिवर्तनकारीहरुले सडकलाईनै घर सम्झी सडकमै बास बसेर दिनरात निरङ्कुश सत्ताविरुद्ध धावा बोलिरहेका थिए। अर्कातिर एउटा सशस्त्र शक्ति जंगलमा त्यतिकै सक्रिय थियो। यता वियसको जिन्दगीलेभने अर्कै मोड लिइरहेको थियो। उनी प्रहरीको जागिरमा प्रहरी सहायक निरीक्षकका रुपमा छनौट भैसकेका थिए। परिवार र साथीभाईहरु उनी प्रहरीमा छिरेको पटक्कै देख्न चाहँदैनथे। शहरमा दिनहुँ भयङ्कर जुलुस निस्किरहेको समाचार आउनु, जंगलमा बन्दुकहरु निरन्तर पड्किरहनु र यता छोरा प्रहरी सेवामा लाग्नु। कुनैपनि अविभावकका लागि यो स्वीकार्य थिएन। तर वियसले आफ्नो जिन्दगीको फैसला आफैं गर्नेनै भए।
अब त बाह्रवर्ष बितिसकेको छ उनले प्रहरी सेवामा लागेकोपनि। प्रहरीभित्रैपनि बढुवा भएर सब इन्स्पेक्टर बनिसकेका उनी गतहप्तादेखि कथाकारपनि भैसकेका छन्। खासमा भन्नुपर्दा 'हिउँमाझी'जस्तो अब्बल कथाकृतिका सर्जक भएका छन् वियस राई।
सानो छँदा आफ्नो दाजुले लेख्ने गरेको नाटकलाई गाउँकै 'चाँदनी सांस्कृतिक परिवार'ले तिहारमा वर्षेनी मंचन गरेको हेर्दै हुर्किएका वियसले नौ कक्षामा पढ्दा दाजुको ठाउँमा आफूले नाटक लेख्ने मौका पाए। त्यो साल नाटक लेख्नुपर्ने बेलामा कसैलाई नभनी उनका दाजु सुटुक्कै नाम्चेतिर घुम्न निस्केछन्। सानो उमेरमै दाजुको ठाउँमा वियसले नाटक लेख्ने हिम्मत गरे र उनको नाटकलाई क्लबद्वारा स्वीकृतपनि गरियो। संयोगले भनौं, यसरी उनले साहित्यमा आफ्नो पहिलो पाइला चाले। बाल्यावस्थामा आफूले लेखेको नाटक मंचन गरिदिने 'चाँदनी सांस्कृतिक परिवार'लाई समर्पण गर्दै 'हिउँमाझी' कथासंग्रहभित्र उनले 'माफ' शीर्षकको कथापनि समेटेका छन्।
प्रहरी सेवामा लागेपछि विभिन्न जिल्लामा सेवारत रहंदा वियसले अनेकौं घटनाहरुसंग साक्षात्कार गरे। ती घटनाहरुका बारेमा लेख्नुपर्दा एक प्रहरी लेखकले बाहेक अरुले न्याय गर्न सक्दैनथ्यो। उनले आफ्नै आँखाले देखेभोगेका कथाव्यथाहरुलाई कथामा उतार्ने प्रयत्न गर्दागर्दै अन्ततः कथाकार भए। 'हिउँमाझी'भित्र प्रहरीअनुभवको साक्षी भएर उनले दुइवटा कथाहरु लेखेका छन्। 'बयान' शीर्षकको कथाभित्र एक आममानिस कसरी बाध्यताले अपराधी बन्दो रहेछ भन्ने बडो मार्मिक कहानी उनले समेटेका छन्। प्रहरीजीवनमै आधारित 'सरुवा' शीर्षकको कथामा एक कर्मठ प्रहरीले इमान्दारिताका साथ उच्चसेवा गरेबापत उसलाई दुर्गम जिल्लामा सरुवा गरिएको यथार्थपरक कहानी उनले समेटेका छन्।
आफ्नै भोगाईका कुराहरु लेख्न कथाकार बनेका वियसलाई साहित्यका अरु विधाहरुले खासै तानेन।
'कथानै किन त?'
यो प्रश्नको जवाफमा वियस आत्मस्वीकृति दिन्छन्, 'कथामा जतिको अरु विधामा म त्यति खुल्न सक्दिनंजस्तो लाग्छ।'
त्यसैले त चार वर्षको अथक मेहनत र धैर्यतापछि 'हिउँमाझी'जस्तो उत्कृष्ट कथाकृति लिएर हामीमाझ आएका छन् वियस!
राजधानीदेखि थोरै पर्तिर छ, वियस जन्मिएको जिल्ला सोलुखुम्बु। तर राजधानीका मान्छेहरु उनको जिल्लालाई कहिल्यै नपुगेको टापुजस्तो ठान्छन्। यो कुराले उनलाई सधैँ पिरोलिरहन्छ। त्यसैले उनी आफ्ना कथाहरुमार्फत सोलुखुम्बुको परिचय दिन चाहन्छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा अवस्थित उक्त जिल्लाको हावापानी, रहनसहनका बारेमा अरुलेपनि थाहा पाउनुपर्छ भन्छन् उनी। आफ्नो यही उद्देश्यलाई कथाकृति 'हिउँमाझी'को रचनागर्भ मान्छन् उनी। यो संग्रहभित्र सोलुखुम्बुको भौगोलिकतामा आधारित रहेर लेखिएका 'नाम्लो' र 'हिउँमाझी'जस्ता कथाहरु उनले राखेका छन्। 'नाम्लो' कथाको माध्यमबाट उनले सगरमाथा आधार शिविरसम्मको वस्तुस्थिति पाठकलाई सविस्तार बताएका छन् भने 'हिउँमाझी' कथाभित्र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्दादेखि ओर्लिंदासम्मका कथाव्यथाहरु समेटेका छन्।
सोलुखुम्बुभित्र संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पर्छ। त्यहाँ शेर्पा जातिका मानिसहरु बसोबास गर्छन्। शेर्पाहरु, जोबिना सगरमाथा चढ्न सम्भव छैन। हिमाल चढ्नलाई हिउँमा बाटो खोल्नेदेखि लिएर पर्वतारोहीलाई बोकेर भएपनि हिमाल चढाइदिने शेर्पाहरुका बारेमा हामी सबैले पढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् वियस। 'हिउँमाझी'को अर्थपनि यस्तै छ। हिउँमाझी अर्थात् पर्वतारोहीलाई हिमाल चढ्न सघाउने मान्छे। अर्थात् शेर्पा जाति। यसरी नेपाली शब्दकोशमा एउटा नयाँ शब्द थपेका छन् वियसले, हिउँमाझी!
'कस्ता विषयहरुलाई आफ्ना कथाहरुमा समेट्न मनपर्छ?'
यो प्रश्नको जवाफमा बडो सटिक जवाफ दिन्छन् वियस, 'हामीले बाँचेको समाजको चित्र कोर्न मनपर्छ मलाई।'
हुनपनि हो, उनले लेखेका कथाहरुले समाजको यथार्थचित्रण गर्छन्।
'टुङना' कथामा कथाकारले द्वन्दकालिन वियोगान्त प्रेमकथालाई जोडेका छन्। कथाको नायक पासांगले फूलसानीलाई गुमाएजस्तै हामीलेपनि द्वन्दमा आआफ्ना प्रिय मान्छेहरु गुमाएका छौं। यो कथा पढ्दा आँखा नरसाउने उमात्रै हुन्छ होला, जसले हामीलाई कहिल्यै निको नहुने चोट दिएरपनि यतिबेला आलिशान महलमा मस्तसंग निदाइरहेको छ!
'चन्दा' कथाभित्र नेपाली समाजमा विद्यमान छुवाछुतको परम्परालाई कथाकारले बडो मार्मिक कथानक दिएर प्रस्तुत गरेका छन्। अझैपनि 'छत्रे'हरु हाम्रोजस्तै रातो रगत बोकेरपनि यो समाजमा अछुत कहलिएका छन् जसको रगत सापटी लिएर कथित उच्च जातिका 'मुक्तिनाथ'हरुका स्वास्नीहरुले पुनर्जीवन पाउँछन्!
'जिम्मा' कथाकोजस्तै समाजभित्र राजनीतिका नाममा प्रयोग भैरहेका चन्चलाजस्ता अबोध पात्रहरु यथेष्ट छन् जसलाई 'वडाअध्यक्ष'हरुले अनेक बहानामा पटकपटक बलात्कार गरिरहन्छन्। कथा पढ्दैगर्दा अहिलेको युवापुस्ता राजनीतिको फोहोरी खेलमा कसरी नेताहरुको निहित स्वार्थका लागि प्रयोग भैरहेको छ भन्ने कटुयथार्थले मुटु चसक्कै घोच्छ!
७२ सालको नाकाबन्दीमा आमनेपालीले भोगेका कथाहरु लेखेर लेखिसाध्य छैन। मैता थामीले आफ्नो नवजात शिशुलाई झाडीमा फ्याँकिन् किनभने उनीसंग शिशुलाई स्याहार्ने पैसा छैन। नाकाबन्दीले उनका पतिको काम ठप्प हुन्छ र उनीहरु भोकै पर्छन्। 'नाकाबन्दी' कथाजस्तै नाकाबन्दीले छोडेर गएको यस्तै एउटाएउटा कथा सबै नेपालीसंग छ। आखिर त्यतिबेला हामीपनि त मैता थामीजस्तै निरीह भएका थियौं नि!
नेपाली समाजमा व्याप्त गरिबीका कारण 'चम्पा'बाट 'हन्ना' भएकाहरु धेरै छन्। गरिबीको फाइदा उठाउँदै देशमा कसरी इशाईकरण मौलाइरहेको छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण 'चम्पाको नाम' कथामा मर्मस्पर्शी शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। गरिब जनताहरुप्रति हाम्रो सरकार उदाशीन हुनाले आज जनताहरु विदेशी धर्मको सरणमा पर्न बाध्य भएका छन्। हाम्रो देश धर्मपरिवर्तनको ठूलो खेलमा फसिसकेको छ!
कथाकारले 'हिजोको कुरा' र 'बसन्त भर्सेज बस्टिन' कथाहरुमार्फत हाम्रै बाल्यावस्थातर्फ विचरण गर्न हामीलाई विवश तुल्याउँछन्। सानो छँदा आफ्नो बालशखासंग झगडा गरेर फेरि मिलेका पलहरु झल्झली याद दिलाउँछ 'हिजोका कुरा' कथाले। हामीपनि हिजो 'करण' थियौं र हाम्रोपनि 'बालकुमार'जस्तो एउटा साथी थियो।
त्यस्तै, हामीमध्ये धेरैले विद्यालय र कलेजमा आफूले चाहेको विषय पढ्न पाएका थिएनौं। बाबुआमा र परिवारले इच्छाएको विषय पढ्नुपरेकाले मानसिक तनाब भोगेका विद्यार्थीहरु समाजमा प्रशस्तै छन्। 'बसन्त भर्सेज बस्टिन' कथाले यस्तो गहन शैक्षिक मनोविज्ञानलाई मिहिन ढंगले उठान गरेको छ।
'जोखना' कथाको जसे राईजस्तै धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने मानिसहरु समाजमा अझैपनि जीवित छन्। हामीले बाँचिरहेको यस्तो आधुनिक समाजमापनि केही मानिसहरु अन्धविश्वासको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। धामी मान्नेले बोक्सीपनि मान्नेनै भयो। बोक्सीकाण्डहरु बेलाबेला चर्चामा आइरहन्छन्। आजपनि ज्वरो आएको बिरामीलाई झारफुक गराउने समाज हामीबीच विद्यमान छ।
कथाकार वियस राईलाई हिमालका कथाहरु नेपाली साहित्यमा कम्ति लेखिएको अनुभव हुन्छ।
उनी भन्छन्, 'हाम्रो हिमालमा अर्गानिक कथाहरु छन्।'
हुनपनि हो, हिमाल र हिमाली भेगमा बस्ने मान्छेहरुका बारेमा हामीसंग त्यति धेरै कथाहरु छैनन्। त्यसैले त वियस आफ्नो कथामा तिखे दमाईलाई लिन्छन् र उनको साथमा डेजी इडेनलाई एभरेस्ट बेसक्याम्पसम्मको यात्रामा लैजान्छन्। मिंग्मालाई 'हिउँमाझी' बनाएर बोनिटालाई सगरमाथा चढाइदिन्छन् कथाकार।
हिमालमा बस्नेहरुको मनोविज्ञान पढेर आचु मिंग्मामार्फत शेर्पाहरुका कुरा बक्न लगाउँछन्, 'शेर्पाहरु नेपालको हिरो हो।'
हिमालका मान्छेहरुमा हिमालको माया छ। किनभने हिमाल उनीहरुको जीवन हो। हिमाल उनीहरुको शान हो। हिमाल उनीहरुको जीवन धान्ने आधारशीला हो। हिमालै नरहे रहन्नन् हिमालीहरु। हिमाल नरहे रहन्न नेपाल!
र त बोनिटामार्फत मिंग्माले ठूला देशहरुलाई यस्तो संदेश पठाउँछ, 'आणविक भट्टीहरु बन्द गर्नू। कार्बनले मेरो चोमोलुङ्ग्मा सुक्ने भो।'
कथाकार वियस राई नेपाली साहित्यको माहोलमा पहिल्यै भिजिसकेका लेखक होइनन्। नेपाली साहित्यमा प्रतिष्ठित पुरस्कार जितिसकेका अग्रजहरुलाई भेट्ने त के, देख्नेसम्मपनि उनले सपना पालेका थिएनन् यसअघि। तर उनको कथाकृति बजारमा आइसकेपछि उनको दौडधूप एक्कासी बढेर गएको छ। हिजो आफूले देख्नमात्रै चाहेका अग्रजहरुसंग आजभने संगै बसेर आफ्नो किताबको बारेमा प्रतिक्रिया सुन्ने मौका पाएका छन्। अग्रजहरुको सकारात्मक प्रतिक्रियाले उनी थप उत्साहित बनेका छन्। आफ्नो कथाकृतिबाट आफूले गरेको अपेक्षाको सन्निकट पुगेको अनुभूत गर्दैछन् वियस। नेपाली साहित्यको बजारमा कथा विधाकोपनि राम्रो सम्भावना देखिरहेका छन् उनी। पछिल्लो समयमा उनलाई महसूस भएको प्रमुख कुरा के होभने, उनलाई लाग्थ्यो, मंच त केवल कवि र गजलकारका लागि हो। तर मंचमा आएर कथाकारको हैसियतले भन्न मिल्ने कुराहरुपनि हुने रहेछन् भन्ने ज्ञान उनलाई मिलेको छ यतिबेला। त्यसैले 'हिउँमाझी' लिएर 'डिस्कोर्स'का लागि छिट्टै देश दौडाहामा निस्कने सोच बनाएका छन् वियसले।
'हिउँमाझी' पछि के त?
'अब उपन्यासमा जाने सोच छ।' उनको रेडिमेड जवाफ छ।
कथामा मात्रै आफूलाई सजिलो महसूस गर्ने वियस के उपन्यासमा सफल होलान्? यो त आउनेवाला समयले बताइहाल्छ!
यति कुरामा चाहिं ढुक्क हुन सकिन्छ, उनले आफ्नो प्रहरी जीवन, पारिवारिक माहोल र साहित्यिक जीवनलाई राम्रोसंग सन्तुलनमा राखेका छन्।
यसको नतिजास्वरुप 'हिउँमाझी' हाम्रै हातमा छ।
'आफ्नो पहिलो कृतिबाट कस्तो अपेक्षा राख्नुभएको छ?'
उनी बडो कुटनीतिक जवाफ दिन्छन्, 'पाठकहरुको राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेको छ। बजारमा गइसकेपछि जरुर सफलताको अपेक्षा त हुन्छनै। म यी कुरामा सकारात्मक छु।'
मभने यतिबेला कथाकृति 'हिउँमाझी'ले कुनै प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार पाएको कल्पना गरिरहेको छु। यो कल्पना यथार्थमा परिणत होस्।